शहीदका नाममा ३५ लाखको पर्खाल ! - NepalTimes
जनआन्दोलनका बेला गोंगबुमा शहीद भएका १९ जनाको नाममा टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ ले शहीद स्मृति बाल उद्यान पार्क निर्माण थालेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण गरिएको उक्त पार्क २ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
नगरसभाको नवौं बैठकले पारित गरेको बजेटअनुसार उक्त पार्कका लागि ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पार्क निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि थप ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
पार्क निर्माणस्थल ११ नम्बर वडा कार्यालयलाई जानकारी नदिइ निर्माण थालिएको वडाध्यक्ष उत्तम अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘पार्क निर्माणबारे वडालाई जानकारी छैन । जानकारी नभएपछि समन्वय र स्वीकृति लिने कुरो पनि आएन ।’
भिरालो र पहिरो जाने स्थान भएकाले उक्त क्षेत्र पार्कका लागि उपयुक्त नभएको स्थानीय बताउँछन् । पार्क स्थलमाथि ढिस्को र तलतिर नागरिकको प्रति जमिन छ । ढिस्कोबाट माटो तलतिर बग्न रोक्नका लागि ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पर्खाल लगाउन लागेको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार गत जेठ १९ गते पार्क निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौता भएको एक महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।